Tumble Pack - Delta Engineering Belzika
Archive avy amin'ny sokajy "Tumble Pack"
Alakamisy 06 Jolay 2017 by Delta Engineering
Fitaovana fametahana boaty kambana tsotra - famonosana
Ity singa ity dia mandatsaka tavoahangy ao anaty boaty, tototry. Photocell dia manisa ny tavoahangy ary rehefa feno ilay boaty dia mamindra ny tavoahangy ao anaty boaty 'foana' ilay flap diverter.
Published in Kitapom-batana
Kitapo fampidinana boaty boaty
Ity singa famoahana ity dia mameno boaty misy tavoahangy foana, feno fonosana. Fametrahana tsikelikely hisorohana ny fiovana amin'ny tavoahangy mafana. Photocell refesina ny toeran'ny tavoahangy & ny tavoahangy dia lavina amin'ny toerana mety.
Silo mianjera entana entana entana
Ity singa mampiditra silo ity dia mameno tavoahangy ao anaty silô 2 miovaova (mifandimby). Mihetsiketsika ny tavoahangy rehefa mianjera amin'ny mpampita entana infeed, ka dia isaina ho 'eo ho eo'. Avy eo, atsipy ao anaty silo izy ireo, amin'ny alàlan'ny mpifidy lozika mihintsy.
Ity singa manafatra entana ity dia mameno tavoahangy ao anaty silo miovaova (mifandimby). Ny tavoahangy dia avy amin'ny mpampita (mijoro), isaina tsirairay ary latsaka ao anaty silo, amin'ny alàlan'ny mpifantina lovia.